चुइगम चपाउने आदत छ ? रिर्सचले गर्यो यस्तो खुलाशा – Sudarshan Khabar
चुइगम चपाउने आदत छ ? रिर्सचले गर्यो यस्तो खुलाशा
के तपाईको चुइगम चपाउने आदत छ ? मेक्सिकोको एक विश्वविद्यालयको ताजा शोध अनुसार चुइगम चपाउने व्यक्तिको मेमोरी राम्रो हुन्छ । चुइगम चपाउने व्यक्तिको दिमाग पनि छीटो चल्ने चाहिं होइन् ।
लुइसयिना स्टेटमा गरिएको शोधमा दिउँसोको खाना पछि चुइगम चपाएमा पुरै दिनमा भोक कम लाग्छ । यसको साथै क्यालोरी धेरै खाने पिउने मानिसहरु चुईगमको कारण खाँदैनन् । छोटो समयको दिमागको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।
वास्तवमा चुईगम चपाउनाले मानिसहरुको मुखबाट आउने दुर्गन्ध पनि हटाउँछ । तर धेरै मानिसहरुलाई यसको फाइदाको बारेमा जानकारी छैन् । चुइगम चपाउँनाले तनाब पनि कम हुन्छ । चुइगम चपाउँदा घबरावट कम हुन्छ । आफूलाई धेरै आनन्द महसुुुस हुन्छ ।
जानकारी अनुसार चुइगम चपाउँदा मुखबाट धेरै थुक निस्कन्छ । यसले डायजेस्टिव एसिडलाई पेटबाट मुखमा आउनबाट रोक्छ । यसकारण खाना सजिलै पचाउँछ । पाचन क्रिया राम्रो हुन्छ । यसको साथै मुखमा भएका किटाणुपनि हट्नेछन् ।
जसको गलामा मोटोपना छ उनीहरुले चुइगम चपाउनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो समस्या भएकालाई एक प्रकारको अभ्यास पनि हो । कसैले त आफ्नो अनुहारको साइज बनाउन पनि चुइगमको प्रयोग गर्छन् । चुइगम चपाउँदा चिन कम हुन्छ र अनुहार गोलोबाट लामो देखिन्छ ।